09 June, 2019 in Maqaallo by
Sida u caadada ahayd ummadda Muslimka bacdal soon, dalka Switzerland waxaa lagu qabtay xaflad aad iyo aad u wayn oo lagu xusayo munaasibadda Ciidul-Fitriga, taaso ka dhacday magaalada St.Gallen ee bariga Switzerland. Xafladdan oo ay isugu yimaadeen d
Sida u caadada ahayd ummadda Muslimka bacdal soon, dalka Switzerland waxaa lagu qabtay xaflad aad iyo aad u wayn oo lagu xusayo munaasibadda Ciidul-Fitriga, taaso ka dhacday magaalada St.Gallen ee bariga Switzerland. Xafladdan oo ay isugu yimaadeen dad aad u farabadan oo isaga kala yimid qaybo kala jaado ka tirsan waddanka Swisska isugu jira rag iyo dumar caruuruhu ay hormood ka yihiin, waxaa goobta khudbado ka jeediyay qaar ka tirsan martisharaftii lagu soo casuumay kulanka oo dareenkooda farxadeed la wadaagayay bulshada sharafta leh.
Munaasibaddan oo ay soo qaban qaabiyeen inay qabsoonto muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan Ururka Dhallinyarada Samafalayaasha Soomaaliyeed ee Bariga Dalka Switzerland uu hoggaamiyo Mudane C/LLaahi Cali Jareere intii ay socotay waxaa halkaasi lagu soo bandhigay suugaan ka turjumaysa hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida cabiraysana farxadaha ku beegan maalmahan iidda oo kale.
Intii lagu gudajiray xafladdani wayn waxaa khudbado wadnaha gilgilay goobta ka jeediyay madaxa guud ee saxaafadda Koonfurta Soomaaliya Dr C/LLaahi Ibraahin Xasan Amaandhoorey oo si akadeemig ah uga waramay midmimada Soomaalida dalka Switzerland tahayna mar waliba in ay sidan isugu duubnaadaan mushtamaca Soomaalidu sidii ay Ciidil-Fitriguba si iskuduubnaashiyo leh ay sameeyeen.
Sido kale, kulanku waxaa khudbado nuxur leh ka jeediyay Mudane Maxamed Askar, Nuur Goosaaw iyo gudoomisada jaaliyadda gobolka Graubunden Ilhaan Maxamed Aadan, iyado goobtana lagu arkayay Mudane Xuseen Qoorleexshe oo isagu ah gudoomiye xigeenka Ururka Dhallinyarada Samafalayaasha Soomaaliyeed ee bariga Switzerland.
Guntii iyo gabangabadii xafladdan lagu waynaynayay maalinta Ciidul-Fitriga oo si rasmi ah loogu casuumay warbaahinta ku bohowday Koonfurta Soomaaliya afka qalaad loo yaqaan Southern Media Co-Operation ooyna wajiyada badan birbirqaya wiilasha labisan iyo gabdhaha naashnaashan isku arkeen, ayaa gaws u raaxayn dabadii ku soo idlaatay jawi aad u heer sareeya.
Nin walibana intuu cunuu ciidamiyaa naag walibana intay nuujiso amar Alle laakiin!!
Safiirkii Soomaaliya u fadhiyay dalka Masar iyo Jaamacada Carabta oo geeriyooday
Iran oo Xabsi Dhigtay Safiirka Britian u joogay dalkaasi iyo Sababta keentay
Soomaali ku rafaadsan Xabsi ku yaalla dalka Iran
Wararkii Ugu Dambeeyay Weerarkii Al Shabaab ku qaadeen saldhiga Milatari ee Camp Simba ee dalka
XAFLAD SIYAASADDA KA BAXSAN OO LAGU QABTAY ZURICH SWITZERLAND !
the background of the new autonomy president Visits: 695969
What 9 World Leaders Were Doing in Their 20s Visits: 43920
Somalia Lost a Career Diplomat, Veteran Politician, Prolific Writer and Pan-Somalist Visits: 39142
Walaalkiisa Dile Oo Maanta Mansab Doon Ah Visits: 34271
54 Sano Kadib Maxaa Keeney In DM Ay Taagnaadaan Meeshii Ay Joogeen 1960 Visits: 28922
Hadakii Ra'isul Wasaare Kheyre oo Jug culus ku noqotay Madaxweyne Farmaajo Visits: 37
Booliiska Kenya oo dilay nin Al Shabaabnimo uga shakiyeen Visits: 18
Maxaa Kasoo Baxey Kulankii Framaajo, Kheyre iyo Labada Gudoomiye ee Maanta Visits: 39
KULANKII DOWLADA FEDERAALKA & MAAMUL GOBOLEEDYADA SHIRKOODA LOOGA GOGOL XAARAYEY OO FASHIL KU DHAMAADEY. Visits: 164
Dowladda Somalia oo Mishiinada Ogsijiinka & qalab kale gaarsiisay Jubbaland Visits: 20